Alshabaab oo bandaw maalintii ah ka hirgaliyay degmada Baardheere ee gobolka Gedo. – Radio Daljir
Diseembar 30, 2012 6:05 b 0
Baardheere, Dec, 30- Wararka naga soo gaaraya degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa soo sheegaya shacabka degmadaasi inay maanta ku baraarugeen amar deg deg ah oo uu soo saaray maamulka Alshabaab kaasoo dhigaya inay magaalada bandaw tahay wixii ka danbeeya 2da duhurnimo.
Gudoomiyaha degmada Baardheere ee Alshabaab Barre Maxamed Ibraahim (Qooje) ayaa maanta shaaca ka qaaday in amarkaasi sida ay tahay loo dhaqan galiyo ciddii aan fulinna tallaabo cad laga qaadi doono.
Qooje, ayaa sheegay in laga bilaabo 2-da duhurnimo ee maanta ilaa amar dambe uu ka soo baxayo, ay xaaladdu tahay bandaw dadkana wuxuu oga digay jabinta amarkaas oo uu tilmaamay inay dhibaato oga imaan doonto.
Labadii duhurnimo ee maanta ayaa la arkayay shacabka oo guryahooda ku yaacaya waxaana gabi ahaanba istaagay ganacsigii suuqyada.
Barre Qooje ayaan xusin sababta keentay inuu amarkaasi oga soo baxo Alshabab, hase ahaatee warar aynu ka helayno mid ka mida dadka deegaanka oo codsaday inaan magaciisa la adeegsan ayaa sheegay inay jirto cabsi ah in kooxdaasi ay gacantooda ka baxdo Baardheere ayna dareemeen xooggag ku soo wajahan.